Mourinho: Zlatan kuma soo bilaaban doono kulanka Basel ogoow sababta
Thursday, January 24th, 2019 - 09:31:09
Wednesday November 22, 2017 - 08:55:29 in Wararka by Hussein Hadafow
Jose Mourinho kuma soo biloowi doono Zlatan Ibrahimovic maadama uu Jose carabaabay inuusan ku jirin xaalad lagu soo biloowi karo kulamo waxaana uu sheegay in kulankaan Basel uu keyd-ka ku soo biloowan doono.
Xiddiga reer Sweden ayaa soo laabtay markii uu 15 daqiiqo ka soo muuqday kulankii Newcastle ee todobaadkii tagay ay United 4-1 ku suldaartay dhigeeda Newcastle United kadib 7 bilood uu garoomada ka maqnaa.
Si kastaba ha ahaatee Mourinho ayaan ku fakareeynin inuu 36 sano jirkaan ku soo biloowaa ciyaar wali ayadoo la rajeeynaayo inuu mar kale keyd ku soo biloowdaa Zlatan.
Jose Mourinho ayaa Sky Sports u sheegay "Zlatan waa hubaa keyd ayuu ku soo biloowan doonaa balse waa mid u furan inaa isticmaalnaa mar walbo.
"Hadii aan badineeno sidii Newcastle oo kale badal ayaan ku keenayaa maadama uu kubada ilaalin yaqaano oo uu xasilooni inoola imaan doono, hadii kale oo aan gool iyo weerar badan u baahanaa dabcan waa hubaa inuu Kooxda siinaayo awood dheeri ah oo aan gool ku dhalin karno wuxuuna la weerar gali karayaa Lukaku.
”Caadiyan wuu ciyaari doonaa macquul in ka badan 15-kii daqiiqo ee kulankii hore. Wuxuuna dareemi doonaa inuu ku raaxeesto ciyaarta in ka badan intii uu sameeye kulankii hore balse maku jiri xaalad lagu soo bilowaa”.
Ibrahimovic ayaa ahaa dhaliyaha ugu sareeyo xilli ciyaareedkii tagay Kooxda Manchester United ciyaaraha oo idil.
W/D: AK Caqil